Kia in Talks over Moving $1.1 Billion Andhra Pradesh Plant | Myanmar Business Today
Home Business Regional Kia in Talks over Moving $1.1 Billion Andhra Pradesh Plant
Kia in Talks over Moving $1.1 Billion Andhra Pradesh Plant
Joyce Lee and Hyunjoo Jin(Reuters)
South Korea’s Kia Motors is discussing with the Indian state of Tamil Nadu the possibility of movinga$1.1 billion plant out of neighboring Andhra Pradesh only months after it fully opened due to policy changes last year, sources close to the talks told Reuters.
“(Kia) are facing problems (in Andhra Pradesh), they have been in preliminary negotiations with us… There isasecretary-level meeting next week, we might have more clarity then,” the official told Reuters on February 5.
Kia said inastatement that it hasalong-term commitment to the Indian market and it aims to utilize the full capacity of its Andhra plant “before considering further expansion”.
Kia is being represented in the talks by executives at its sister company Hyundai Motor, which is India’s second-largest automaker and has all its car production facilities in Tamil Nadu, the state official added.
“This isaproblem for all companies including Kia. The cost of moving the plant would be too high and would set the company back by about two years, and they have made huge investments,” said one of the sources aware of Kia’s concerns.
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၁ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိသည့် Andhra Pradesh မှ စက်ရုံကို တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Kia Motors က Tamil Nadu ပြည်နယ်ကို ရွှေ့ထားဖို့ ဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်းများနှင့် ဆွေးနွေးနေကြောင်း ရိုက်တာသတင်းက ဖော်ပြသည်။
ကမ္ဘာ့ပဉ္စမအကြီးဆုံးကားဈေးကွက်ရှိရာ အိန္ဒိယရှိ Andhra Pradeshပြည်နယ်ရှိ Kia စက်ရုံကို ဆောက်လုပ်ရေးပိုင်းနှစ်နှစ်ကြာပြုလုပ်ပြီး ဒီဇင်ဘာလက ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ယင်းစက်ရုံသည် နှစ်စဉ် ကားအစီးရေ ၃ သိန်းအထိ ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး တိုက်ရိုက်နှင့် သွယ်ဝိုက်သောအားဖြင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ၁၂၀၀၀ ခန့်ကို ဖန်တီးပေးထားသည့် စက်ရုံတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
လက်ရှိတွင်တော့ ယင်းစက်ရုံကို ကားပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းအဓိကထုတ်လုပ်ရာ Tamil Nadu ကို ပြောင်းရွှေ့ရန် စီစဉ်နေကြောင်း ပြည်နယ်၏ အကြီးတန်းအရာရှိတစ်ဦးက ဆိုခဲ့သည်။
” Kia က Andhra Pradesh စက်ရုံအတွက် ပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ် ။ သူုတို့ဘက်က ကျွန်တော်တို့နဲ့ ပဏာမဆွေးနွေးထားပြီးတာတွေလည်း ရှိပါတယ်” ဟု အရာရှိက ဆိုသည်။
Kia က အိန္ဒိယဈေးကွက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ရေရှည်ကတိကဝတ်ရှိထားပြီး ၎င်းသည် Andhra စက်ရုံ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အပြည့်အဝအသုံးချရန် ရည်မှန်းထားကြောင်း Kia၏ ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
အစောပိုင်းက Tamil Nadu ပြည်နယ်အာဏာပိုင်များနှင့်ဆွေးနွေးမှှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး မှတ်ချက်ပေးခဲ့ခြင်းမရှိသကဲ့သို့ ၎င်းတို့အနေဖြင့်လက်ရှိရှိထားသည့် စက်ရုံနေရာမှတခြားနေရာကို ရွှေ့ပြောင်းဖို့ အစီအစဉ်မရှိကြောင်း Kia က ဆိုထားသည်။
ပြည်နယ်အာဏာပိုင်အဖွဲ့ကဆိုချက်အရတော့ အိန္ဒိယ၏ဒုတိယအကြီးဆုံးကားထုတ်လုပ်သည့် ဟွန်ဒိုင်းကုမ္ပဏီနှင့်မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် Kia သည် Tamil Nadu ပြည်နယ်တွင် ကားထုတ်လုပ်ရေးနှင့်ဆိုင်သည့် အဆောက်အအုံပစ္စည်းများရှိထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း ရိုက်တာသတင်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။
ဟွန်ဒိုင်းဘက်က မှတ်ချက်တစ်စုံတစ်ရာပေးခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ Tamil Nadu နှင့် Andhra Pradesh ပြည်နယ်နှစ်ခုလုံးရှိ ဝန်ကြီးရုံးများကလည်း အဆိုပါကိစ္စအတွက် မှတ်ချက်ပေးခဲ့ခြင်းမရှိပေ။ Andhra ပြည်နယ်ရှိ မြေငှားရမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်ပြီး Kia က ပြဿနာများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရပြီး ပြည်နယ်အစိုးရအနေဖြင့် ယခင်အစိုးရမှပေးသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှှုများနှင့်ဆိုင်သည့် မက်လုံးများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်လိုကြောင်း ဆွေးနွေးနေသည်ဟု သတင်းများက ထွက်ပေါ်လာသည်။
စက်ရုံကိုတမီးလ်နာဒူးသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းက Kia အတွက်ထောက်ပံ့ရေး ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချစေနိုင်မည်ဖြစ်ကာ ကားထုတ်လုပ်ရေးအတွက်လိုအပ်သည့် အစိတ်အပိုင်းများ တင်သွင်းသူများနှင့် ပိုမိုနီးကပ်စေမည် ဟု ရိုက်တာကို အမည်ထုတ်ဖော်ခြင်းမရှိသည့် သတင်းအရင်းအမြစ်တစ်ခုက ဆိုသည်။ စက်ရုံကို ပြည်နယ်တစ်ခုမှ တခြားတစ်ခုသို့ပြောင်းရွှေ့ရန် အစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အတိအကျမသိရသေးကြောင်းလည်း ယင်းသတင်းအရင်းအမြစ်က ရှင်းပြသည်။
Kia က၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် Andhra ရှိ စက်ရုံကိုစတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး ၂၃ သန်းစတုရန်းပေအကျယ်အဝန်းရှိသည့် စက်ရုံသည် Seltos SUV ကဲ့သို့သော မော်တော်ယာဉ်များကို ထုတ်လုပ်ပြီး အိန္ဒိယအပြင်ပြည်ပဈေးကွက်ကို ရည်ရွယ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစက်ရုံသည် ရေရှည်တွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထုတ်လုပ်မှု ကွန်ရက်၏အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုလည်း ခန့်မှန်းထားခြင်းခံခဲ့ရသည်။ သို့သော်လည်း ဖွင့်ပွဲအပြီးလအနည်းငယ်အတွင်းစက်ရုံကို ပြောင်းရွှေ့အခြေချရန် စဉ်းစားခြင်းသည် အိန္ဒိယရှိ ဖက်ဒရယ်နှင့်ပြည်နယ်အဆင့်တွင်ပေါ်လစီအပြောင်းအလဲနှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများရင်ဆိုင်ရသောစိန်ခေါ်မှုများကို မီးမောင်းထိုးပြသကဲ့သို့ဖြစ်နေသည်။
SOURCEJoyce Lee and Hyunjoo Jin (Reuters)
Previous articleJapan Races to Build New Coal-Burning Power Plants
Next articleCoronavirus Shuts Macao, World’s Gambling Capital